Kala duwanaanta ee dalka Mareykanka of America | USAHello | USAHello
Kala duwanaanta ee dalka Mareykanka of America
Kala duwanaanta ka dhigan tahay isku dar ah waxyaabo kala duwan. It means people of all kinds from different backgrounds, da'doodu kala duwan, oo la aaminsan yahay kala duwan. But Americans often use word diversity to mean people of different races. Learn about diversity in the United States today.
Marka aad u guurto USA, waxaad la kulmi doontaa dadka jinsiyadaha badan. tartanka Ereyga waxaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu gudbiyo qofka midabka maqaarka ama asalkaad ka soo jeedo.
White, dadka aan Hispanic yihiin inta badan ee USA. Dadka jinsiyadaha kale waxaa inta badan loo yaqaan “laga tirada badan yahay.” Isbaanishka, iyo Latino Americans waa kooxda labaad ee ugu weyn, ku xiga Americans Afrika iyo Aasiya. Kooxaha kale ee American jinsiyadda yihiin Americans Native, Alaskanka, Native Hawaiians, iyo jasiiradaha Pacific. Dad badan oo Maraykan yihiin isir isku qasan.
Race waa mawduuc muranka ee USA, sababtoo ah taariikhda laga cabsado addoonsiga wadankan. African Maraykanka ayaa la dulmay taariikhda, oo ay ahayd daqiiqad aad u muhiim ah taariikhiga ah marka Barack Obama loo doortay Madaxweynaha ugu horeeyay ee madow ah.
Inkasta oo waa sharci darro in la takooro dadka ku saleysan jinsiyad, xaqiiqadu waxa ay tahay in ay wali jiraan dhibaatooyin badan oo la kulmay midab takoor ee USA.
Dadka qaarkood waxay dareemaan raaxo hadalka ku saabsan tartanka. Waxaa mararka qaar adag in la ogaado waxa aad wici dadka jinsiyada kaladuwan ka. Tusaale ahaan, Maraykanka qaar ka mid ah dhaxal ahaan Afrika waxay jecel yihiin in lagu qeexaa sida Americans Afrika, laakiin qaar kale waxay ka jecel yihiin shuruudaha madow ama qofka midabka. kaasaa run ah dadka ka soo jeeda koonfurta iyo Bartamaha America. Qaar ka mid ah tixgelin karaan naftooda Hispanic, qaar ka mid ah jeclaan in loogu yeedho Latino ama Latina, iyo kuwa kale oo la odhan kara caddaan ama door bidaan erey kale. Haddii aad u baahan tahay in lagu qeexo qof marka la eego ay tartanka sabab qaar ka mid ah, oo aadan hubin sida loo qeexo, waxaad ka codsan kartaa.
Waxaad ka heli laga yaabaa in ay la yaab leh in aad inta badan ka codsaday jinsiyaddaada. Haddii aad buuxinta waraaqaha, Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad calaamadee sanduuqa ah ayaa sheegay in haddii aad tahay Asian, madow, Hispanic, white, usiineysa in sababta aasaasiga ah ee su'aashan waa in ay la socdaan in barnaamijyada dowladda waxaa ku filan baahida of laga tirada badan yahay. Haddii aadan rabin in ay ka jawaabaan, aad had iyo jeer ka bixi kartaa su'aasha maran ama calaamadee sanduuqa oranaya “Inaad doorato iska soo jawaabin” ama “No Ma jawaabin.”
Haddii aad isku aragto midab ee goobta shaqada, raadinta guryaha, ama mar kasta oo kale, Waad awoodaa email noogu oo waxaan isku dayi doonaa inuu kuu gudbiyo khayraad si ay kuu caawiyaan. Or, haddii aad si fudud u qabto wax su'aalo ah ama aad rabto inaad noo sheegto waayo-aragnimo dhaqanka, fadlan si xor ah u sidoo email noogu soo.
USA waxaa mararka qaarkood loo yaqaan a “iyo maddiibad salad” ama “barafka dheri.” Taas macnaheedu waxa weeye waxaa jira dad ka yimid dalalka kala duwan oo soo jeeda oo ku nool mid ka mid ah dalka. Taariikh, USA waxaa lagu magacaabaa “quruun soo guurey,” inkastoo ay jiraan Native Americans ku nool North America dheer ka hor muhaajiriinta Yurub ugu horeysay soo gaaray 1600kii.
maanta, qaar ka mid ah Americans leeyihiin fikrado ku saabsan soo galootiga. Inta badan ra'yiga, kuwaas oo ku salaysan yihiin cabsi ama qaldo fikradaha. Haajiriinta bixiyaan xoogga badan iyo faa'iidooyinka ay u USA. Sidoo kale, Maraykanka kuwaas oo soo gaari ka dhanka ah soo galootiga ka cabsan ama eexda ka dhanka ah jinsiyadaha kala duwan.
In Maraykanka, shaqsiyaad ka weyn waa kuwa 65 iyo ka weyn. at 65, Americans joojin kartaa shaqada oo aad hesho lacagta hawlgabka, ama mushahar yar oo ka fariistay, oo ka socda dawladda.
America waa ka duwan yahay dalalka kale oo badan sababtoo ah ka weyn Americans inta badan kali ama hay'adaha ku nool. About 29% of Americans ka badan 65 oo keliya ku noolaan., iyo 47% boqolkiiba haweenka ka weyn 75 oo keliya ku noolaan. kuwo kale oo badan ayaa ku nool guryaha ama xanaanada guryaha sare.
laga yaabaa inaad dareentid sida Americans, dhalinyarada gaar ahaan American, ma ixtiraamaan dadka waayeelka ah si la mid ah sida odayaasha sida loola dhaqmo dhaqankaaga. In USA, tani waxaa mararka qaarkood loo yaqaan a “Qarni farqiga.” Dadka dhallinyarada ah iyo jir ayaa laga yaabaa in fikrado kala duwan, sida ay sameeyaan dalalka kale, laakiin warbaahinta Mareykanka u egtahay in ay diiradda saaraan dhallinyarada.
Elder Americans inta badan la kulmaan dhibaatooyin dhaqaale iyo caafimaad. dhibaatooyin Kuwanu waa run, waayo, soo galootiga iyo qaxootiga ka weyn sidoo kale. Haddii aad tahay qof waayeel ah, laga yaabaa in aad ku fikiray USA siin lahaa daryeel dheeraad ah idiin ka badan aad qaadato. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay shaqo u helaan in aad naftaada ku taageeri ee USA, sida waayeelka badan samayn. Laakiin waxaa jira barnaamijyo gaar ah si ay u caawiyaan dadka waayeelka ah, iyo haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u hesho mid ka mid ah, email noogu.
Takoorka waa marka aad si xun loola dhaqmay sababtoo ah asalka shakhsiyeed. Dadka takoori karo sababo badan, sida ay tartanka, midabka maqaarka, jinsiga, da, ama diin. Takoorka waa sharci darro in USA. Tani macnaheedu waa in dadka waa in loola dhaqmo si siman iyo fursadaha isku siiyey aan loo eegayn waxa ay ka soo jeedaan waa. Tusaale ahaan, ganacsi lama oggola in la takooro dadka waayeelka ah. Xitaa haddii qof duq ah, waa inay fursad isku mid ah si aad shaqo u hesho sida qof ka yar haddii ay si kale u qalma oo shuqulka qabto. The Equal Employment Opportunity Commission US qeexayaa noocyo kala duwan oo takoor ah. Haddii aad aaminsan tahay in lagu takooray marka aad codsanaysid shaqo, waxaad soo gudbin kartaa a mas'uul ka ah takoorka. Waxay qaadan kartaa sano kiis in ay ka shaqeeyaan ay jidka marayo Nidaamka, si loo qorsheeyo si aad u hesho shaqo kale inta cabashadaada waxaa loo tixgaliyay.
dhaqanka aan haboonayn
Marka aad baraneyso dhaqan cusub, it can sometimes be hard to know if someone’s behavior towards you is because of a cultural difference or if the person is just being rude or behaving in a bad way. Haddii aad weligiinba xaalad aad dareento raaxo, weydii qofka kale in ay joojiyaan dabeecadooda. Haddii qof sii dhaqanka ah ka dhigaya in aad raaxo, fadlan weydii saaxiib aad ku kalsoon American caawimo.
Kuwanu waa isku qaadyo ku saabsan dhaqanka American - ma xaqiiqooyin, fikradaha kaliya inuu kaa caawiyo inaad si fiican u fahmaan sababta American ah oo laga yaabaa in lagu simaha hab ka duwan waxa aad loo isticmaalaa in lagu. siyaabo American iyo dhaqanka ma ka fiican ama ka xun yihiin siyaabo kale - oo kaliya oo kala duwan.
Sida loo helo xarun sare iyo macluumaadka kale ee waayeelladoodii
Baridda ardayga qaxootiga ah ayaa loo ogol yahay ii safri aan tigidh diyaaradeed a